Kenyaanka oo sugaya maalinta doorashada, kana midaysan rajo nabadeed - Sabahionline.com
Kenyaanka oo sugaya maalinta doorashada, kana midaysan rajo nabadeed
Waxaa qoray Bosire Boniface oo jooga Wajeer iyo Rajab Ramah oo jooga Nairobi
Maarso 01, 2013
Iyadoo doorashadii Kenya ee aadka loo sugayey ee 4-ta Maarso ay soo dhowaatay, ayay Kenyaanka sheegayaan inay rajo qabaan ayna cabsanayaan, balse ay ka midaysan yihiin rabitaankooda ah in dhacdadani ay si nabad ah u dhaafto.
Nin ag maraya darbi lagu qoray "Kenya waxaan uga baahannahay nabad" oo ku yaala xaafadda Kibera ee Nairobi 27-kii Febraayo, 2013. [Phil Moore/AFP]
Musharraxiinta madaxweynenimo ee Kenya, ka billow bidix, James Ole Kiyiapi, Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga oo jooga shir duco 24-kii Febraayo, 2013 oo ka dhacday Nairobi iyada oo uu hoggaaminayey David Owuor (dharka cad). [Stringer/AFP]
Keenyaanka oo si walaac ku jiro u sugaya natiijooyinka doorashada oo si tartiib ah u soo xaroonaysa
Keenyaanka oo u qulqulay goobaha lagu codeeyo iyagoo iska indha-tiray cabsida laga
Dhallinyarada oo dhiirragelinaysa diiwaan-gelinta cod-bixiyaha ee Gobolka Waqooyi Bari Kenya
Isniinta, cod-bixiyeyaasha waxay u dareeri doonaan meelaha laga codeeyo si ay u doortaan madaxweyne, guddoomiyeyaal gobal, duqeyda, xubno barlamaan, haweenka matalaya gobollada iyo kuwa heerka laameed. Haddii uusan midna mid ka mida siddeeda musharrax ee madaxweynenimo ku guulaysan waayo aqlabiyadda codadka, doorasho ku-celis ah ayaa la qaban doonaa 11-ka Abriil.
Si ka duwan doroashooyinkii hore oo lagu codeeyn jiray halka warqad, ayay markaan cod-bixiyayaashu isticmaali doonaan warqad cod-bixineed oo lagu calaamadiyay lix midab, oo midab waliba uu tilmaamayo xil mucayan ah. Ku dhawaad 14.3 milyan oo Kenyaan ah ayaa isku diiwaan-galiyay sannadkii hore inay codeeyaan, oo inkasta oo inta badan ayan xaqiijisan in xogtoodii si fiican loo diiwaan-galiyay bishii Janaayo,haddana ayan tani saameeyn ku yeelan doonin in ay codeeyaan, sida uu ballan ku qaaday Komishanka Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka iyo Soohdimaha Kenya (IEBC). Cod-bixiyeyaasha Nairobi oo quud-daraynaya nabad Ouma Omollo, oo ah 45 jir, joornaal ku iibiya Waddada Kenyatta ee Nairobi, ayaa sheegay in dadaalladii nabadeed ee ay musharraxiinta madaxweynenimo isugu yimaadeen kulamadii ducada ahaa iyo doodihiiba ay gacan ka geeysteen yareeynta xamaasadda taageerayaasha musharraxiinta.
"Waxaan cashar ku qaadaney rabshadihii dhacay doorashadii 2007-2008-dii ka dib," ayuu yidhi Omollo, oo codkiisa ka dhiiban doona Kibera. "Dadka saboolka ah ayaa is dilayey ayagaana ugu khasaaro badnaa. Taasi waa cashar uusan qofna rajaynayn inuu dib u dhadhamiyo."
Qiyaastii 1,200 oo qof ayaa la dilay halka 300,000 oo kalena lagu barakiciyay intii ay socdeen rabshadihii ka dambeeyay doorashooyinka, sida laga soo xigtay Qaramada Midoobay.
Omollo ayaa ugu baaqey IEBC inay xoojiyaan wacyi-gelinta cod-bixiyeyaasha illaa laga gaadhayo maalinta doorashada, siiba goobaha miyaga iyo waliba meelaha ay magaalooyinka uga badan yihiin dadka saboolka ah. "Way i dhaaftay inaan ka qeyb qaato doorashadii tijaabada ahayd ee la qabtay 24-kii Febraayo," ayuu yidhi, isagoo intaas ku daray inay u noqon lahayd fursad uu ku barto nidaamka.
Wuxuu sheegay in warqadda kaliya ee lixda cod lagu bixinayo ay abuuri karto jahwareer. "Haddii aynaan helin macluumaad nagu filan intaan maalintaas la gadhin, waxay nagu noqon doontaa kadiso adag," ayuu u sheegay Sabahi.
Joyce Njoki, 30 jir, oo ah mas'uul dhinaca maamulka ah oo ka shaqeeysa shirkad tiknoolajiyadda macluumaadka ah oo khaas loo leeyahay kuna taalla Nairobi, ayaa muujisay cabsi ah in doorashooyinku ay dhalin karaan rabshado cusub oo siyaasadeed.
"Uma maleeynayo in dadaalladan nabadeed ay dhaqeen nacaybka siyaasadeed ee ka dhashay isku-dulqaadasho la'aanta qotodda dheer ee ku saleeysan qowmiyadaha ee dhex yaal dadka Kenya," ayay u sheegtay Sabahi, iyadoo raacisay in wax walba oo ay natiijada doorashadu noqotaba, in Nairobi iyo meelo kale oo waddanka ahi dagaal ka dhici karo.
"Waxaan isku diyaarinayaa waxa ugu xun, laakiin waxaan ku duceysanayaa in ay nabaddu guulaysato," ayay tidhi, iyadoo raacisay inay billowday inay raashin ku kaydsato gurigeeda.
Maalinta codeeynta, Njoki waxay sheegtay in ayada iyo saygeedu ay xilli hore tagi doonaan goobaha codeeynta si ay u soo codeeyaan markaasna ay ku soo noqon doonaan gurigooda si ay arrimaha ugala socdaan telefishanka.
Mary Kimutai, oo jirta 24, ahna ardayad sharciga dhigata oo sannadkii ugu dambeeyay kaga jirta Jaamacadda Nairobi, waxay sheegtay inay ku kalsoon tahay in doorashadu ay si nabad ah u dhici doonto waayo hannaanka doorashada oo si fiican loo sameeyn doono.
Kimutai, oo ku noqon doonta gurigeeda ku yaala Eldoret si ay uga qeyb gasho doorshada, waxay sheegtay in IEBC ku guulaystay kalsoonida shacabka uuna xaqiijiyay inuu leeyahay awood uu ku qabto doorasho caddaalad u dhacda oo lagu kalsoonaan karo.
"Markii hore, dadka waxay u mudaaharaadi jireen aragti ahayd inay komishanka iyo maxkamaduhuba xisbiyo u eexanayeen, oo markaas aan lagu aamini karin inay dhex-dhexaadiyaan murannada ka yimaada doorashada ama inay qabtaan doorasho lagu kalsoonaan karo," ayay u sheegtay Sabahi. "Haddase waxaan leenahay guddi madax-bannaan, garsoor dib loo habeeyay oo ay Kenyaanku raali ka yihiin ayna aaminsan yihiin inay hawl wanaagsan qaban doonaan."
Kimutai ayaa sheegtay inay ka qeyb gashay doorashadii tijaabada ahayd ayna u aragtay hannaanku inuu ka sahlan yahay sidii ay filaysay. Xataa cod-bixiyeyaasha aan aqoonta lahayn nidaamka way u sahlanaan doontaa inay codeeyaan hadday helaan toostoosin yar, ayay tidhi.
John Karanja, oo jira 23, kabo-tolana ka ah suuqa Muthurwa ee ku yaala halka looga baxo Nairobi, ayaa sheegay inuu filayo in musharraxiinta madaxweynenimo ee laga guulaysto ay si deg-deg ah u aqbalaan in laga badiyay ama ay wixii dacwo ah oo ay qabaan la aadi doonaan maxkamadaha. "Waxaan filaynaa in markaan ay kuwa laga guulaysto aqbali doonaan guul-darrada," ayuu u sheegay Sabahi. "Haddii ay dareemaan in la khiyaamey, waa inaysan u soo saarin taageerayaashooda jidadka si ay uga mudaaharaadaan guul-darradooda, laakiin waa inay tagaan maxkamadaha. Si aan walwal aan loo baahnayn loogu beerin shacabka, IEBC waan inay dadajiso soo saarista iyo si rasmi ah ugu dhawaaqidda natiijada si looga hortago mala'awaalka natiijada."
Kenyaanka waqooyiga oo ka shaqeeynaya sidii looga hortagi lahaa dagaal
Haashim Cali Cabdi wuxuu ka soo safray Nairobi oo uu ka yahay maamule hudheel wuxuuna tagay tuuladii uu ka yimid ee Rhamu oo ka tirsan Degmada Mandera si uu uga qeyb galo doorashada.
Cabdi wuxuu sheegay inuu ku rajo weynaa in doorashadu ay u dhici doonto si rabshad la'aan ah, inkastoo dhowaan laga walwalsanaa inay colaadi dib uga dhex dhalato Dagoodiyaha iyo Garraha, oo ah laba qabiil oo taariikh u leh inay isku qabsadaan xilalka doorashada loo galo.
"Waligeen waan wada noolayn, lakiin siyaasadda ayaa marar badan na dhex gasha," ayuu u sheegay Sabahi. "Tobankii sano ee la soo dhaafay, labada qabiil waxay isku dhaceen ugu yaraan afar goor, laakiin waxaa socday shirar ay leeyihiin labada beelood si loo xaqiijiyo inay daggaanaan jirto ka hor, inta ay socoto iyo doorashada ka dib."
Degmada dariska la ah ee Wajeer, Cali Cabdi Bishaar, oo ah 39 jir deggan Griftu, ayaa sheegay inuu isna rajeeynayo doorasho nadab u dhacda.
"Waxaan ku dhex jirnay siyaasadeeyn aan kala joogsaneeyn oo xataa wax-soo-saarkeenii saameeysay. Waxaan sugi la'a maalintan aan dooranayno hoggaamiyeyaasha aan rabno oo aan ka tanaasulayno siyaasad si aan ugu dhaqaaqno horumar," ayuu u sheegay Sabahi.
"Markaan codeeyo, waxaan ku noqonayaa guriga si aan natiijada ugala socdo idaacadaha maxalliga ah," ayuu yidhi. "Waxaan rajaynayaa inuu guulaysto musharraxa aan la jiro; haddii uusan guulaysan, waan niyad xumaanayaa, laakiin waxaan rajaynayaa in qofkii raaya uu dadka dantooda niyadda ku hayo."
Iyadoo ay soo socoto maalintii codeeynta, ayay Hay'adda Nabadda iyo Horumarka Wajeer (WPDA) qabanaysay shirar xaafadeedyo lagu dhiirri-galinayo codeeyn u dhacda si nabdoon.
"Waxa aan hadda arkayno waa uun taageero xamaasadeeysan oo loo hayo musharraxiin mucayan ah iyo dacaayad lagu hayo taageerayaasha kuwa ka soo horjeeda," ayuu yidhi Xidhiidhiyaha WPDA Xuseen Aadan Maxamuud, isagoo raaciyay inaysan jirin wax ishaar u ah rabshado.
Codeeyayaasha Xeebta oo walwalsan
Waxaa Gobolka Xeebta lagu qaybiyay waraaqado dadka deegaanka lagu waydiisanayo inaysan codeeyn, kuwaasoo walaac keenay. Harriet Mkawale, oo ah 39 jir deggan Degmada Kwale, ayaa sheegtay inay xataa dad soo booqday guryaha si ay uga celiyaan dadka inaysan ka qeyb qaadan doorashada. "Saraakiisha ammaanka ayaa noo ballan qaadey nabad-galyadeena, laakiin waxaa jirta cabsi yar waayo ma garanayno kuwa ka dambeeya hanjabaadaha," ayay u sheegtay Sabahi. "Arrinku intaas wuu ka sii culus yahay waayo kooxda gooni u goosadka ah ee Golaha Jamhuuriga Mombasa (MRC) waxay si cad ugu wacdinayeen nabad waxayna dadka ku guubaabinayeen inay codeeyaan."
Kooxda MRC waxay markii hore ku hanjabeen inay qaadici doonaan doorashada guud waxayna soo oogeen dacwo ay isku dayayeen inay ka hor-joogsadaan xukuumadda Kenya inay doorasho ku qabato Gobolka Xeebta, taasoo ay maxkamad Kenyaan ah burisay Diseembar.
Madaxa Bilayska Gobolka Xeebta Aggrey Adoli ayaa sheegay inay bilaysku baarayaan halka ay ka yimaadeen waraaquhu. "Waxaan qaadanay tallaabooyin ammaan si aan u xaqiijino in dadku ay ka qeyb qaataan dhaq-dhaqaaqa iyagoon la hor istaagin. Waxaan sidoo kale ilaalo ugu jirnaa wax dhaq-dhaqaaq ah oo la xidhiidha argaggixisonimo," ayuu u sheegay Sabahi.
Mkawale waxay sheegtay in si kasta oo uu jahwareer u jiro ay codeeynayso, dabadeedna ay qoyskeeda ugu tagi doonto guriga si ay u sugaan natiijada. Ma jeclaysatay maqaalkan?
March 4, 2013 @ 09:36:44AM
Asc w. w. walaalayaal. Walahi maanta aad ayaan u ugu faraxsanahay sida aay codbixinta uga dhacday wadankeena balse waxaan kaxumahay dhibaatooyinka kadhacay Mombasa, Garisa iyo Mandera. Waxaan qabnaa rajo weyn in isbadal weyn ee xagga dowlada ah kadhici doono wadanka. Shacabka reer kenya waxaay tuseen in aay dad nabad jecel yahiin oo ay ka baaluqeen xagga siyaasada. Waa sheey aad u wanaagsan oo lagu farxo xaqiiqdii. Waxaan u rajeynayaa wadanka nabad waarta oo lagu wada riyaaqo.
Waxaan kacodsanayaa guddiga madaxa banaan ee doorashada Kenya in aay si xaqaani ah howshooda u qabsadaan oo aay cidna uexanin xagga natiijada doorashooyinka.
maxamed yuusuf cali
March 4, 2013 @ 01:51:12AM
anigo ah maxamedyuusuf cali waxan cod keyga ugu shubilaha mrs a huro kenya ok